Manohitra ny Botnets - Fomba hiadiana amin'izy ireo
Ny botnets dia miasa amin'ny fifandimbiasana amin'ny ordinatera sy ny herisetra manafika ary manaparitaka fitaovana maro samihafa manerana izao tontolo izao. Ny botnet dia ny fanangonana solosaina finday izay nopihina ary ampiasaina ankehitriny hanatanterahana asa tsy ara-dalàna. Ny hackers dia tsy mila mampiasa ny adiresy IP anao hamelezana ny fitaovana. Manangana tambajotra matanjaka amin'ny ordinatera zombies izy ireo ary manara-maso ireo fitaovana samihafa any amin'ny toerana lavitra.
Nanomboka nanao ny marika tamin'ny 2001 ny Botnets rehefa nandefa code tsy dia mampiahiahy ny aterineto ary nanafika gadona maro tsy misy pentina tsy nahalala ny mpampiasa.
Indro ny Artem Abgarian, manam-pahaizana lehiben'ny Semalt , dia niady hevitra momba ireo fomba samihafa hiadiana amin'ny botnets amin'ny aterineto.
1. Manaova tolotra tranonkala fanivanana
2. Hanova ireo navigateur
Ny fomba iray hafa hiadiana amin'ny botnets dia manova ny navigateur web anao. Tokony hojerenao amin'ny navigateur hafa afa-tsy ny Internet Explorer sy ny Firefox ianao. Ireo mpiziriziry roa ireo dia mora amin'ny hackers ary tsy mampiseho ny valin'ny faniriana
Raha toa ka misy ny safidy tsara indrindra dia Google Chrome, izay tsy misy fitaovana hafa.
3. Esory ireo sora-tanana
Ny fepetra henjana nefa tena mahavariana dia ny manala ny navigateur amin'ny alàlan'ny sehatra manontolo, kanefa mety hametra-panitsiana ny vokatra ateraky ny tranonkala sy ny fampiharana amin'ny aterineto izany. Tsy safidy mety ho an'ny orinasa sy ny olona miasa amin'ny maha-mpividy mahaleotena azy ireo izany ary mahazo tombony amin'ny tranok'izy ireo.
4. Ampiasao ny rafitra fisorohana-fisorohana sy fisorohana ny fitsabahana
Ny fomba iray hafa mahaliana sy mahasoa dia ny mamolavola ny fisorohana ny fisorohana sy ny fitsabahana amin'ny fampidiran-drivotra. Ohatra, raha mitsambikina ao amin'ny Internet Relay Chat ny solosainao, dia azonao ampiasaina ny iray amin'ireo rafitra roa ireo mba hiarovana azy avy hatrany. Ny IPS dia manara-maso ny fitondrantenan'ny fitaovanao ary manondro ny fanafihana HTTP mafy, izay midika fa ny fametrahana ireo rafitra roa ireo dia mety hahasoa anao sy ny fitaovanao.
5. Arovy ny votoatin'ny mpampiasa
Zava-dehibe ny miaro ny votoatin'ny mpampiasa anao amin'ny fomba tsy tapaka mba tsy hahatonga azy ireo ho lasibatry ny mpanoratra malaza amin'ny aterineto. Dan Hubbard, filohan'ny Websense, dia miteny fa ny iray amin'ireo olana goavana amin'ny tranonkala noforonina dia ny trangan'ny Web 2.0.
6. Ampiasao ireo fitaovana fanarenana
Raha voan'ny aretina ianao dia tokony hampiasa fitaovana fanarenana. Ireo orinasa toy ny Symantec dia mampiasa fitaovana maimaim-poana toy izany rehefa manampy izy ireo hamantatra sy hanadio ireo karazam-borona rehetra sy botnets. Raha manao izany ianao dia afaka mifidy izay tokony hitsidika ny tranokalanao ary tsy tokony. Hanatsara ny kalitao ankapobeny amin'ny tranonkalanao izany ary hanakana ny rafi-pitatitra amin'ny rootkit sy botnet Source .